गल्ती सुधार्ने शर्तमा ज्ञानेन्द्र शाही छुटे, कास्की प्रवेशमा रोक ! - Purbeli News
Trending # राशिफल199# मृत्यु186# पक्राउ139# मृत्यु121# पक्राउ55# नेकपा41# केपी शर्मा ओली40# दुर्घटना38
गल्ती सुधार्ने शर्तमा ज्ञानेन्द्र शाही छुटे, कास्की प्रवेशमा रोक !
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ समय: २१:१४:०६
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएको बताउने ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही ललितपुर प्रहरीको हिरासतबाट रिहा भएका छन्। उनलाई गल्ती सुधार्ने शर्तमा रिहा गरिएको ललितपुर प्रहरी परिसरका डिएसपी सन्तोष तामाङले जानकारी दिए।
आइतवार पुल्चोकमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेपछि उनलाई हिरासतमा लिइएको थियो। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा युट्युबरहरुसँग हात हालाहाल भएपछि प्रहरीले उनलाई सुरक्षाका लागि लगेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो।
तर पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको आग्रहमा शाहीलाई प्रहरीले मुद्दा नचलाइ रिहा गरेको हो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कास्की जिल्ला राष्ट्रिय युवा संघले शाहीलाई कास्की प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । दुई दिनअघि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउने बुद्ध एयरको जहाज डिले गराएको भन्दै गालीगलौज र हातपात प्रयास गरेका उनलाई विज्ञप्ती नै जारी गरी कास्की जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
बीएण्डसीका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईलाई पितृशोक